Ingqondo evakalayo kunye noJosé Frías | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Isandi sokuqonda kunye noJosé Frías
Ngomsebenzi obuyele kwiintsuku zakhe zokurekhoda ngaphezulu kweshumi leminyaka elidlulileyo, uMvelisi weSandi soMculo uJosé Frías kudala enothando lweshishini lokumamela. Nangona waqalisa umculo, wabamba iindima ezininzi ezahlukeneyo zemveliso yomsindo, ekhokelele ekusebenzeni kwakhe kwiiprojekthi zabathengi abanolwazi oluphezulu, njenge Motorola, IBM, ESPN, ixesha Imagazini kunye nokunye.
Ukwabelana ngebali lakhe kule fomathi yamva nje ye-DPA "Isandi sokuqonda" I-Q & A:
Uqale njani ukuba ungumxube wezandi?
Ndifumene isiqalo sam sokuxuba isandi sokuxuba malunga neminyaka esibhozo eyadlulayo. Emva kokusebenza kumzi mveliso iminyaka embalwa, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibuyele esikolweni ndiyohlola ezinye izandi. Ngelixa ndigqiba isidanga sam, ithuba lokusebenza njengomsebenzi we-boom kwifilimu yabafundi lawa ezingubeni zam. Intsalela yayiyimbali.
Nceda usixelele ngemvelaphi yakho kunye nokukhathalela kwakhor, kubandakanya nayiphi na iiprojekthi ezaziwayo / ozithandayo okanye naliphi na amabhaso awuphumeleleyo ngomsebenzi wakho.
Ndiqale kwisandi njengonjiniyela wokurekhoda amagcisa eIndie kunye neemvumi kumbindi we2000s. Emva kokuzama isandi esiphilayo, isandi somdlalo, iinkqubo zekhompyuter kunye nesandi sangemva kokuvelisa, ndiye ndafumanisa isandi sokuvelisa - kwaye bendiziva ndisekhaya ukusukela oko.
Ngexesha lam njengomxube wezandi wokuvelisa isandi, ndiye ndaba nethamsanqa elihle lokusebenza kwiiprojekthi ezahlukeneyo, ezisusela kwizinto ze-indie ukuya kwi-docu-series ukuya kwintengiso nokunye okuninzi. Eminye imisebenzi yangaphambili ndiyazidla ngokubandakanya ubunyani beTV I-Fire Island; I-Motorola's IMOTO iphinde yaphinda iphulo lokufaka uphawu kwimiboniso bhanyabhanya kunye nomculi wegraffiti uFutura; ixesha Udliwanondlebe lwe "2016 loMntu oMagazini"; INkosi yeNgonyama kwiBroadway's Isangqa soBomi kwi360 kunye no-Aladdin kwiBroadway's Umhlobo onje ngam kwi360 amava okwenyani IBM's Izandi ze-IBM uchungechunge lwe-ASMR lokuntywila; Ashe '68 amava okwenyani kunye nexwebhu elizayo le-ESPN kumdlali we-NBA osethathe umhlala-phantsi kunye ne-NBA Cares Inxusa, uFelipe Lopez, ukukhankanya ezimbalwa.
Ezi ntsuku, kunye nawo onke amaxesha am okufika njengesixhobo sokuxuba izandi, ndikwasebenza njengeqabane kunye nentloko yemveliso e- Isahluko Sesine, Inkampani evelisa inkonzo epheleleyo egxile kwimithombo yeendaba.
Yeyiphi eyona projekthi mkhulu usebenze kuyo?
Andazi ukuba ibaluleke njengeyona projekthi iphambili ebomini bam, kodwa ngokuqinisekileyo eyona inendawo ebaluleke kakhulu kum ngenxa yobuchule bokuyila, ubuchwephesha kunye nembali Ashe '68. La ngamava okwenyani malunga nomdlali wokuqala omnyama we-tennis ukuphumelela i-US Open kwaye yabekwa kwinqanaba lokugqibela lase-US elivulekileyo eNew York. Ibinombhiyozo wayo wokuqala kuMnyhadala weFilimu weSundance yonyaka ophelileyo njengenxalenye yeNew Frontier.
Le projekthi ibiyinto emnandi ukusebenza kuyo ngenxa yemiceli mngeni yobugcisa. Kwakufuneka sirekhodishe ngobunyani, ngokuvumelanisa, naphina phakathi kwabadlali abasixhenxe, ngelixa kwangaxeshanye siphinda sisebenzisa imisindo emininzi, izandi zokudlala, ithoni yegumbi, iimpendulo zempembelelo kunye nokurekhodwa kwesandi sembizo sinokufumana izandla zethu. Sasifuna ukongeza iposi ngolwazi oluninzi olunokubakho sonic njengoko sinako. Embindini wayo konke, yayiyi-DPA 4060 kwaye I-4063 Miniature Omnidirectional Microphones, esebenze njengezixhobo eziphambili ekubetheleni ngokungafaniyo intsebenzo yabadlali.
Unexesha elingakanani usebenzisa i-DPA? Uqale nini ukusebenzisa i-DPA kwaye ngoba?
Ndiqale ukusebenzisa i-DPA mics ejikeleze i-2013, kungekudala emva kokuba ndifunde inqaku elicokisekileyo malunga nokusetyenziswa kukaSimon Hayes kwabo kuTom Hooper ukudakumba ngaphantsi. Ndikhumbula ndibukele imovie kwaye ndaphawula ngokukodwa ukuba isandi sasinjani. Kweli nqaku, uSimon uncome ii-MPA ze-lavalier mics malunga nokuba kufutshane kangakanani nomdlalo kwiinkampani ze-boom mics, kunye nendlela ii-lav ezidlale ngayo indima ephambili ekubamba yonke intsebenzo. Ndithengisiwe! Kwafuneka ndizame, ke ndiye ndathenga ii4060 kunye nee4063s, ndaze ndazisebenzisa ngokukhawuleza kumabonwakude we-TLC endandisebenza kuwo ngelo xesha. Ndaye ndachwechwa kukuba bangcono kangakanani xa bekhala kunezinye ii-lavalier mics zam. Ndigqibele ukutshintsha uninzi lweemisk zam ze-lavalier kunye ne-DPA, kwaye kungekudala emva koko, ndongeza ezinye i-DPA boom kunye nee-microphones ze-gooseneck
Yeyiphi imveliso okanye imiboniso oyisebenzisileyo? Usebenzisa ziphi iiMics ze-DPA?
Iikopi ze-DPA zivakala kakuhle kakhulu kwiprojekthi nganye endiyivelisayo. Ngalo lonke ixesha ndisebenzisa umsebenzi wombhobho we-lavalier, i-4060 lukhetho lwam. Ngalo lonke ixesha ndityala okanye ndiziqhobosha imakrofoni, ngakumbi emotweni, ndisoloko ndisebenzisa a d: nikela™ I-4018 Supercardioid Microphone -Ukunyanzeliswa kwangaphambili kwe-MMP-G kunye nokunyuka kwentaba yothutho, a I-4098 Supercardioid Microphone okanye a I-4080 Miniature Cardioid Microphone. Umpu wam omfutshane wokhetho I-4017 Shotgun Microphone.
Kwi I-Fire Island iprojekthi, omnye umceli mngeni ekuye kwafuneka siwole kukuba amalungu aphosayo ayakuhlala engenazambatho, nto leyo eyayingenakufikwa xa usenza umboniso bhanyabhanya eparadesi elwandle. Ekuqaleni, siqwalasele ukusebenzisa isisombululo esise-eshelfini esivela kwi-DPA, i I-Microphones ye-4561 ye-Necklace (iyekile ngoku), kodwa sikhethe ukwenza i-rigs yeseshoni yesiqhelo ukuze sikwazi ukulawula ngakumbi kwindlela abajonga ngayo. Sibambisene noRave ukusuka kwiPearl yeJiara yeParaxai ukwakha imickey yeentamo ezininzi usebenzisa i-4060 Miniature Omnidirectional Microphones. Oku kwenza ukuba sikwazi ukurekhoda isandi kwiimeko ezinzima kakhulu kulo mboniso.
Yeyiphi eminye yemiceli mngeni yee-miking kwiiprojekthi osebenza kuzo? Ukusebenzisa i-DPA kusinceda njani ukusombulula le mingeni?
Owona mceli mngeni endijongene nawo - nokuba kungumboniso weTV obhaliweyo, ifilimu ebhaliweyo engabhaliswanga, okanye amava okwenyani - kukuqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukubamba ukusebenza komdlali weqonga okanye kwesihloko ngexesha lokuvelisa njengenyaniso nangokucacileyo. Umbhobho endiwusebenzisayo kufuneka ubonakale ekuhleni, ngoko ke kufuneka impendulo efuthiweyo rhoqo. Ukongeza, malunga nokuba nelizwi elinamandla kangakanani ilizwi lomntu, isandi sokuzimela esincinci kunye nohlu olubanzi lwezinto eziguqukayo ziyimfuneko yokwamkela yonke into ukusuka ekuhlebezeni ukuya ekukhaleni (ngamanye amaxesha konke ngaphakathi kuthathe okufanayo). I-DPA ivelisa eyona mibhobho intle yokuhlangabezana nale nkqubo.
Sixelele malunga nesitayile sakho sokusebenza kunye neenkcukacha ezithile malunga nokuhamba kwakho kwemihla ngemihla:
Ndiqala yonke iprojekthi ngonxibelelwano olucokisekileyo nomlawuli okanye umyili. Injongo yam kwezi ngxoxo kukuqonda ngokupheleleyo iprojekthi, ukuzikhupha kwiinjongo zokuyila kunye nokumisela iimfuno zobugcisa zokuzifezekisa. Xa sele sizichithile izinto ezisisiseko-ezinje ngamanani amalungu okanye izifundo, iindawo, ikhabethe, iipropathi, i-VFX, ukubanjwa okushukumayo, njlnjl-ndifuna unxibelelwano kunye namasebe afanelekileyo ukulungiselela iimfuno zesandi seprojekthi. Ndikwathetha kwisebe leposi ukuseka iifomati zokuhamba komsebenzi, kubandakanya ukurekhoda, ukuvumelanisa, ukulandelela uninzi, imethadatha, ukuxutywa kokuhlelwa, ukuhanjiswa, njl. Unxibelelwano ngeposi kufuneka, ngakumbi kwiiprojekthi zobugcisa ezintsonkothileyo ezifana neVR okanye kwi-AR. Ndifumanisa ukuba ixesha elininzi lichithwe kweli nqanaba, kokukhona siphumelela ngakumbi ngexesha lokuvelisa, kunye nezinto ezingcono esiziphumelelayo.
Suku lwemihla ngemihla, ugxininiso lwam kukufumana eyona ndlela ifanelekileyo yokufumana isandi sendawo okanye isenzo esijongene noko. Ngaba inokufezekiswa nge-boom mic okanye ndifanele nokuba ndiye kumcofa? Ndingabambisa imicros kwenye indawo? Ngamaxesha amaninzi, ndizifumana ndisombulula ingxaki, ngakumbi xa ndicinga ngendlela yokwenza indawo okanye imeko ingangasebenzi kakuhle (funda: ungangxoli). Kum, kubuchwephesha, konke oku malunga nokubekwa kwemayikrofoni efanelekileyo, kunye nokuveliswa kwesiginali elubala kunye nomqondiso wokuya kwingxolo. Ngobuchule, imalunga nokuqinisekisa ukuba imisebenzi kunye namaxesha abomi benene ayabanjwa.
Yeyiphi iiprojekthi zexesha elizayo oceba ukusebenzisa ii-DPA mics kuzo? Ngaba ungandixelela kancinci?
Inkampani yam okwangoku iphuhlisa iiprojekthi ezisebenzayo ezimbalwa apho siza kuthi sisebenzise ii-microphone ze-DPA ekurekhodweni kwesandi, ngelishwa andikwazi ukukhankanya nayiphi na into ngeli xesha. Nangona kunjalo, ndisandul 'ukugqiba ukuvelisa kwi-documentary ye-ESPN ezayo kumdlali odlala umhlalaphantsi we-NBA kunye ne-NBA Cares Ambadors, uFelipe Lopez. Le projekthi ibaluleke kakhulu kum, zombini njengomntu ozelwe eDominican ngokwam, kunye ne-basketball fan. Ukupeyinta lo mfanekiso: owona mdlalo wokuqala webhasikithi ye-basketball endakhe ndaya kuyo yayingumdlalo womboniso wexesha eliphambi kweMiami Heat neMinnesota Timberwolves (iqela eladlala ngalo uFelipe ngelo xesha) ngasemva kwi2002 kwiDominican Republic. Ndiyayikhumbula kakuhle loo mini-isihlwele sase-Dominican sasigcwalisa ukungamisi kukaFelipe, kwaye iiTimberwolves zawuphumelela umdlalo. Ukusebenza kuxwebhu malunga naye phantse iminyaka ye-20 emva kwexesha livakalelwa njengokupheliswa, kwaye kuya kuhlala kunendawo ekhethekileyo entliziyweni yam.
Ngekhe ndikwazi ukubamba onke amaxesha e-vérité ngaphandle kwe-4063 lavalier mic kunye ne-d: i-XDUMXB yemikrofoni yokudubula.
Uwubona phi umzi-mveliso we-TV kunye nefilimu oza kuhamba kwiminyaka emihlanu ezayo? Ngaba ubona naziphi na izinto eziphambili ezikuchaphazela indlela osebenza ngayo kwixesha elizayo?
Lo ngumbuzo onzima, kwaye andazi ukuba ndinempendulo efanelekileyo. Ngamanye amaxesha kunzima ukubona ukuba yintoni ezayo ngaphambili xa uphakathi embindini wayo, kodwa ndiyabona kwaye ndiyathemba lokukhula kokubini kwizixhobo esizisebenzisayo nakubuchule bethu kwindlela esizisebenzisa ngayo. Ulwimi lwe ifilimu Iyaqhubeka ukuvela ngendlela enomtsalane, ivelisa amabali athatha ukuphefumla kunye nezitayile zetinema. Oku kunokuba ngumceli mngeni kwisebe lezandi nokuba siyenza njani imisebenzi yethu, kodwa ndiyakholelwa ukuba kukho ezinye izisombululo zokuyila ezinokuthi zifezekiswe, ngakumbi xa unalo lonke iqela lakho kwicala lakho.
Ndicinga ukuba siza kubona ngakumbi umxholo oqhubeka ukutyhala imida, efuna ukuhanjiswa okutsha kwee-boom, i-lav kunye nee-mics zezityalo. Ubalo lwethrekhi ephezulu kakhulu iya kusasazeka ngakumbi- kwaye andithethi ngeesibhozo kwiitraki ze-12, kodwa phezulu kwi-20 kunye ne-30 tracks. Ndiyathemba ukubona amasebe amakhulu anezandi eza kunceda ukumelana nale miceli mngeni mitsha.
Ukuqeshwa kwiKlabhu ye-DPA Master's nguLeonardo Romero Velasquez, umlawuli wentengiso we-DPA waseLatin American, kunye noChristopher Spahr, usekela-mongameli we-DPA wase-US wentengiso kunye nentengiso (kwizihlandlo ezahlukeneyo), uFrías unodumo olukhulu kunye nentshisakalo kwimakrofoni ze-DPA ze-lavalier.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie evakalayo Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida Microphone zeDPA ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SJGolden - Isandi Imikhonto kunye neentolo IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo ndiphila 2019-09-19
Previous: Iikhamera ze-KUSI ziphucula iikhamera ze-ENG ukuya kwi-JVC 2 / 3-intshi INCAM GY-HC900
next: IVideudio kunye noMhleli weVidiyo